मनमोहक पन्छी | Nagarik News - Nepal Republic Media
लुम्बिनीमा सारस । तस्बिर: अमृत भादगाउँले
अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल
चरा कति प्रजातिका हुन्छन् ? चराको संख्या किन घटिरहेको छ ? चरा हाम्रो लागि किन आवश्यक हुन्छन् ? हामीले चराको संरक्षण किन गर्नु पर्छ ? चरा संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ ? पृथ्वीमा चरा नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला ? धेरै चरा कसरी मर्छन् ? नेपालमा कम पाइने प्रजातिका चरा कुन् हुन् ?
ल ! अब यी प्रश्नका उत्तर पढौँ । सबै देशका आ–आफ्नै राष्ट्रिय चरा हुन्छन् । त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे हो । यो हिमाली भेगमा पाइन्छ । डाँफे जस्तै धेरै चराले गर्दा वातावरण रमणीय हुन्छ ।
नेपालमा धेरै प्रजातिका चरा पाइन्छन् । विश्वमा चराका १० हजार जति प्रजाति पाइन्छन् । तीमध्ये धेरै चरा लोप हुने अवस्थामा छन् । कुनै चरा बढी गर्मीका कारण मर्छन् भने कुनै मानिसले सिकार गरेर । चराको सिकार मासुका लागि मात्र गरिन्छ । कतिपय चरा बिरालाका सिकार बन्छन् । यिनै कारणले गर्दा चराको संख्या घटिरहेको छ ।
मलाई लाग्छ कोइलीको मीठो बोलीले मानिसलाई गाउन सक्ने बनाएको हो ।
चरा हाम्रो लागि अति आवश्यक जिव हुन् । चराले हाम्रो वरिपरि सौन्दर्य बढाएका हुन्छन् । चराले प्रकृतिको जीवनचक्रलाई सन्तुलित बनाउँछन् । चराले गर्दा नै यहाँ थरिथरिका विरुवा उम्रन्छन् । चरा खाद्य श्रृङ्खलाका मुख्य पात्र हुन् । चराले परागकणमा पनि भूमिका निवार्ह गर्छन् ।
हामीले चराको संरक्षण गर्नुपर्छ । बिरालोलाई चरा नजिक जान दिनु हँदैन । छतमा चराका लागि चारो छरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा चरा मानिससँग नजिकिँदै जान्छन् । हामीले हाम्रो आँगन वा खेतमा कुनै प्रकारको औषधी छर्नु हुँदैन । औषधीले गर्दा चराको ज्यान जान सक्छ । हामीले चराको गुँडबाट झिकेर बचेरालाई हातमा लिनु हुँदैन ।
हामीले प्लास्टिकको प्रयोग पनि कम गर्नुपर्छ । चराको पेटमा प्लास्टिक गयो भने उसको ज्यान जान्छ । गाडि चलाउँदा जहिले पनि कम गतिमा चलाउनुपर्छ । गति बढि छ भने चरा गाडिमा ठोक्किएर मर्न सक्छन् । हामीले चरा सिकार गर्नुहुँदैन । उनीहरूको बासस्थना जङ्गलको विनाश गर्नु हुँदैन ।
पहिलेपहिलेको तुलनामा अहिले चरा कम देखिन्छन् । सुगा, बुलबुल, चखेवा, उल्लु जस्ता धेरै चरा लोप हुनेक्रममा छन् । कतिपय चरा हराइसके । यिनीहरूको संरक्षण, गर्ने कर्तव्य हाम्रो हो ।
चरा प्रकृतिका अनुपम उपहार हुन् । तिनको सुन्दर आवाजले सबैलाई मुग्ध बनाउँछ । मलाई लाग्छ कोइलीको मीठो बोलीले मानिसलाई गाउन सक्ने बनाएको हो । भँगेराको चिरबिर आवाज, मयुरको फिँजारिएको पखेँटा, नौरङ्गी डाँफे, यिनीहरूको सुन्दरताको अगाडि सबै कुरा खल्लो अनुभव हुुन्छ ।
चरा सानादेखि ठूला सबै प्रकारका हुन्छन् । सानो बट्टु चरादेखि ठूलो अस्ट्रिच सम्म देख्न पाइन्छन् । यी प्रकृतिका सुन्दर पन्छी मनमोहक र आनन्ददायी हुन्छन् । त्यसैले पनि यिनको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ ०८:४१ शुक्रबार